Maqal: Kaluumeysatada Deegaano ka tirsan Gobolka Bari oo ka cabanaya Jariiflayaal – SBC
Maqal: Kaluumeysatada Deegaano ka tirsan Gobolka Bari oo ka cabanaya Jariiflayaal
Kaluumeysatada Deegaanada Bariga gobolkan Bari ayaa soo saaray Cabasho ay kamuujinayaan Gaadiid Badeed Jariifla yaal ah oo fara kulul ku haya.
Mid ka mid ah Kaluumeysatada Deegaanka Tooxin iyo raasa caseyr laguna magacaabo Cumar Maxamuud Axmed (Qariib) ayaa la hadlay Idaacada SBC waxaanu soo gudbiyay cabashadiisa ku aadan gaadiidkan jariifla yaasha ah .
Cumar waxa uu sheegay in kooxahan jariiflayaasha ah ay wataan gaadiid badeed aad u tiro badan ayna yihiin dhamaantood Iiraaniyiin u soo shaqotagtay si sharci daro ah in ay u gurtaan kheyraadkii badda.
Waxa uu intaasi raaciyay Cumar Qariib in gurashada qeyraadka badda u dheertahay dhibaatooyin kale oo ay kula dhaqaaqaan kaluumeysatada deegaanka, iyagoo qalabkii ay dhigteen badweyntana si day ugu kaluumeystaana ka jar jara .
” kooxahan Iiraaniyiinta ah waxay sameeyeen Jariif aduunka Mamnuuc ka ah, Waxaa intaasi dheer weerar joogta ah oo ay ku soo qaadaan kaluumeysatadii deegaanka u dhashay, iyagoo rasaas la dhaca kana qaata qalabkii ay ku shaqeysanayeen” sidaasi Waxa yiri Cumar Maxamuud Axmed .
Dhageyso:- RIIX AMA DAAR
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay kaluumeysatada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata Badahooda ay dhibaateeyaan kooxahan Jariiflayaasha Ajaaniibta ah, waxayna cabashada ka soo yeertay maanta kaluumeysatadan ku soo aadeysaa xili maxkamada Boosaaso uu ka furan yahay dhageysiga Galdacwadeedka kaluumeysato u dhashay dalka Iran oo dhowaan ciidamada Badda Puntland ka soo qabteen Xeebaha deegaanka Qaw ee duleedka Boosaaso.